Suldaan Baane oo Baaq u jeediyay Komishanka iyo Axsaabta | Somaliland.Org
Suldaan Baane oo Baaq u jeediyay Komishanka iyo Axsaabta
November 6, 2012	Hargeysa (Somaliland.Org) Suldaan Cali Cabdilahi Baane ayaa baaq u jeediyay komishanka doorashooyinka iyo ururada u tartamaya doorashooyinka goleyaasha deegaanka.
Suldaam Baane waxa uu baaqiisa uga digey komishanka iyo ururadaba in wax laga beddelo qaabka uu u socdo ololaha musharaxiinta oo uu ku tilmaamey inuu yahay mid ay ku jirto halis badan iyo falal anshax xumo ahi.
“Waxa aan u soo jeedinayaa komishanka doorashooyinka oo iyagu u xil saaran arrimahan socda in wax laga beddelo qaabka wax u socdaan oo u muuqda mid ay ka dhalan karto khatar badan oo naf iyo maalba leh, waxa aan leeyahay waa in sida ugu dhaqso badan wax looga qabtaa.
Suldaanka oo qoraal uu arrintaa kaga hadlayo na soo gaadhsiiyay waxa uu intaa ku darey; “ Waxa aan ka codsanayaa komishanka doorashooyinka in la joojiyo habkani khatarta iyo anshax xumada huwan, waxa aan leeyahay ururada idinka dantiinna weeye in aad wax ka beddeshaan sida wax yihiin,. Ururku ama xisbigu haddii uu mar ka hadlo fagaarayaasha waxa ay ila tahay in aaney jirinba wax kale oo uu ugu soo noqnoqdaa, waayo wixii uu odhan lahaaba yidhi, wax u soo kordhaya oo aan qarash aheynina ma jiro. Sidaa awgeed waa in wadajir looga hawl gala oo la joojiyaa mushkiladani oo ah mid si weyn loo wada dareemay una baahan wax ka qabasho degdeg ah,” ayuu yidhi Suldaan Baane.
Previous PostQaranimadda Somaliland waxba kama bedalayso shakhsiyaad qaran dumisnimo u xuub siibayNext PostWasiir Xirsi Oo Shahaado sharaf gudoon siiyay Xildhibaanada Baarlamaanka UK ee taageera Somaliland	Blog